महामारीले बढायो प्रविधिमा जाने सहकारी र प्रयोग गर्ने सदस्य - सहकारी खबर
महामारीले बढायो प्रविधिमा जाने सहकारी र प्रयोग गर्ने सदस्य
Share : 1,676
प्रविधिमा भएको विकाससँगै आफ्नो कारोबारलाई सहकारीले पनि प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह आफ्नो सेवालाई सहकारीले विस्तार गर्ने क्रममा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत सदस्यलाई सहज सेवा सुविधा उपलब्ध हुन पुगेको छ ।
पुँजी होस् वा कारोबारको हिसाबले नेपालको सहकारी संस्थाहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह भैसकेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको सफ्टवेरदेखि क्यास लेससम्मको कारोबारमा सहकारी उत्रिएका छन् । प्रविधिको प्रयोगबाट गरिएका कारोबारहरु पारदर्शी, सहज, छिटो र छरितो समेत हुने भएकाले सदस्यको विश्वास जित्न र कायम राख्न सकिने भएकाले पनि सहकारीको प्रविधिमा आकर्षण बढेको हो ।
कारोना भाईरसका कारण गरिएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) मा प्रविधिको कारोबार गर्ने सहकारीका सदस्यहरु बढेका छन् । त्यस्तै प्रविधिको प्रयोग नगर्ने सहकारीहरु प्रविधिमा जान थालेका छन् । लकडाउनको कारणले गर्दा नगदरहित कारोबार गर्न सदस्यहरु आकर्षित भएको र प्रयोगकर्ता सदस्यको संख्या पनि बढिरहेको संस्थाहरुले जनाएका छन् । लकडाउनको समयमा संस्थासम्म पुगेर कारोबार गर्न असहज भएका कारण प्रविधिमा सदस्यको ध्यान खिचिएको हो ।
लकडाउनकै बीचमा धेरै सहकारीहरु प्रविधिमा गएका छन् । लकडाउनकै बीचमा काठमाडौंको स्वयम्भु स्थित हाम्रो एकिृकत साकोस लगायत धेरै सहकारीहरुले मोबाईल बैंकिङ सुरु गरेका थिए । देशभर धेरै सहकारीले लकडाउनकै समयमा मोबाई बैंकिङ र नयाँ फिचर थप गरेका छन् । धेरै सहकारी संस्थाहरुले घरमै बसेर अनलाईन बैंकिङको सेवा समेत लिन सकिने व्यवस्था गरेका थिए । लकडाउनकै समयमा सहकारीहरुले बैंक खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिने सेवा विस्तार गरेका थिए । सहकारीहरुले नेपालको जुनसुकै वित्तीय संस्थाको एटिएम मेशिनबाट पैसा निकाल्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सहकारीहरुको मोबाईल बैंकिङ सेवामार्फत सदस्यले ब्यालेन्स ईन्क्वायरी गर्ने, लामो तथा छोटो स्टेटमेन्ट प्राप्त गर्ने, ऋणको जानकारी लिने, फण्ड ट्रान्स्फर गर्ने, चेक अनुरोध तथा रद्द गर्ने जस्ता बैंकिङ सुविधा तथा मोबाईल टपअफ, ईन्टरनेट, टि.भी., विद्युत, खानेपानी, मुभी तथा हवाई टिकट जस्ता भुक्तानी सुविधा समेत उपलब्ध रहेको छ ।
सहकारीमा प्रविधि भन्ने वित्तिकै गैंडाकोट स्थित बिकू बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम आउँछ । नेपालमा पहिलोपटक मोबाई बैंकिङ, एटिएम, क्युआरकोड भुक्तानी लगायतको प्रविधि भित्राउने सहकारी विकू हो । विकूले २७ औं वार्षिकोत्सव (२०७५ भदौ ५ गते) समारोहमार्फत एटिएस सेवाको सुभारम्भ गरेको थियो । विकूका २७ हजार सदस्य प्रविधिमार्फत कारोबार गर्दछन् । मोबाईल बैंकिङ, एटिएम, एसएमएस, क्युआरकोड सेवा लिने सदस्य संख्या २७ हजार पुगेको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव पौडेल बताउनुहुन्छ । लकडाउनको समयमा मात्रै १ हजार ८ सय १७ जना सदस्यले मोबाईल बैंकिङ सेवा सुरु गरेको उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै १२ सय सदस्यले यस बीचमा एटिएम कार्ड लिएका छन् । महामारीको समयमा एटिएम सेवा, मोबाईल बैंकिङ लगायत प्रविधिमार्फत हुने कारोबार सेवा लिले सदस्य ७ हजार बढेको पौडेल बताउनुहुन्छ । ‘महामारीको समयमै एक दिनमै एटिएम कार्ड लिन सकिने व्यवस्था मिलायौं । घरबाटै मोबाईल बैंकिङ सेवा सुरु गर्न सकिने व्यवस्था मिलायौं’, प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, ‘फोन, एसएमएस, सोसियल मिडियामार्फत पनि सदस्यलाई प्रविधिमार्फत कारोबार गर्न अनुरोध गर्यौं ।’ प्रविधिमार्फत कारोबार हुँदा कार्यालयमा भिडभाड समेत कम भएको अनुभव उहाँ सुनाउनु हुन्छ । महामारीले सदस्यलाई प्रविधिको आवश्यकता महशुस गराएको र प्रयोगकर्ता समेत उल्लेख्य मात्रमा बढेको उहाँको भनाई छ । कारोबारका हिसाबले अधिकांश ठूला सहकारीहरुले मोबाईल बैंकिङ सुरु गरिसकेका छन् । ती संस्थाहरुले सदस्यहरुलाई प्रविधिमार्फत कारोबार गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
नव कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले लकडाउनको समयमा अत्याधिक मात्रामा प्रविधिमार्फत कारोबार गरेको संस्थाका शाखा प्रबन्धक हारिप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । लकडाउनको समयमा सदस्यहरुले मोबाईल रिर्चाज बढी गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘लकडाउनको समयमा संस्थाको एपमार्फत मोबाईल रिर्चाज बढी भएको तथ्यांकले देखाएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एटिएम प्रयोग, बैंक ट्रान्सफर सेवा पनि यो लकडाउनको समयमा बढेको छ ।’ विगत लामोसमयदेखि प्रविधिमा संस्थाले जोड दिदैै आएको र यो लकडाउनको समयमा सदस्यहरुले प्रविधिमार्फत हुने कारोबारमा जोड दिएको पाण्डेको भनाई छ । संस्थाका झण्डै ४ हजार सदस्यहरुले एटिएम प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।
विगतका वर्षदेखिनै मोबाईल बैंकिङ, एटिएम सेवा प्रवाह गर्दै आएको काठमाडौंको जोरपाटी स्थित नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले लकडाउनकै समयमा इन्टरनेट बैंकिङ, बैंकमा रकम ट्रान्सफर र घरमै बसेर मोबाईल बैंकिङ रजिष्ट्रर गर्ने सेवा थप गरेको थियो । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी सञ्चालक विकल्प पाठकका अनुसार लकडाउनको समयमा संस्थासम्म आएर कारोबार गर्न सहजताका लागि सेवा थप गरिएको बताउनुभयो । लकडाउनको समयमा प्रविधिमार्फत कारोबार गर्ने सदस्यहरु बढेको उहाँको भनाई छ । नयाँ सेवा लिने सदस्यको संख्याको साथै एटिएमबाट पनि धेरै मात्रामा रकम निकालेको उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै बालाजु स्थित मेगा ड्रिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले पनि मोबाईल बैंकिङको अधिकतम प्रयोग गरेको संस्थाका प्रबन्ध सञ्चालक महाशंकर रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । संस्थाले यस समयमा क्यासभन्दा पनि प्रविधिमार्फत हुने कारोबारलाई जोड दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी काठमाडौंको थानकोट स्थित चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले स्थापना दिवस (२०७७ बैशाख ६) गतेबाट सुरु गरेको रियल टाईम बैंक ट्रान्सफर सुविधा सदस्यलाई थप गरेको थियो । कार्यालयसम्म आई सेवा लिन असमर्थ सदस्यहरुको लागि यो सेवा प्रभावकारी देखिएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराईएको कारणले देशका अन्य भागमा रहेका आफ्ना परिवारजन तथा आफन्तहरुलाई रकम भुक्तानी गर्न पनि यो सुविधाले सहज भएको श्रेष्ठको भनाई छ ।
त्यसैगरी संस्थाले लोड टु वालेट सुविधा, क्युआरकोड भुक्तानी सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ । सहकारीबाट बैंकमा रकम ट्रान्सफर प्रभावकारी देखिएको र छिट्टै बैंकबाट पनि सहकारीमा रकम ट्रान्सफर सेवा संस्थाले उपलब्ध गराउने श्रेष्ठले बताउनुभयो । संस्थाले विभिन्न खाद्य स्टोर, मेडिकल, खानेपानी संस्थानहरुमा संस्थाको उक्त सुविधा उपलब्ध भएकोले सदस्यहरुले अत्यावश्यक खाद्य सामग्री तथा औषधिहरु खरिद गरि सकेपछि मोबाईलबाट कोड स्क्यान गरि भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । कोभिड १९ कोे महामारीको समयमा स्थानीय मेडिकल, मिनीमार्ट तथा खानेपानी समितिहरुमा सदस्यहरुले क्यु.आर. कोड स्क्यान गरी आफ्नो खाताको रकमबाट भुक्तानी गर्ने बढेको सिर्जना मेडिकल थानकोटका सञ्चालक रामप्रसाद रानाभाटले बताउनुभयो । सस्थाको चन्द्रागिरि एम. सर्भिस एपबाट उपलब्ध हुने उक्त सेवाका प्रयोकगर्ताहरु हाल ४ हजार ५ सय भन्दाबढि रहेका छन् ।
कास्कीमा रहेको पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारीले २०७५ माघ ७ गतेदेखि एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । लकडाउनको समयमा एटिएम प्रयोग गर्ने सदस्य उल्लेख्य मात्रामा बढेको संस्थाका मुख्य प्रबन्धक मीलन ढकालले जानकारी दिनुभयो । लकडाउनको समयमा सरदरमा दैनिक ४० देखि ४५ जना सदस्यले एटिएमको प्रयोग गर्ने गरेको ढकालले जानकारी दिनुभयो । ‘यो समयमा प्रविधिमार्फत हुने कारोबारलाई सदस्यले उच्चतम प्रयोग गर्नुभएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सदस्यहरुले फोन गरेर पनि एटिएम कार्डको माग गनुभएको छ ।’ संस्थाका करिब ५ सय सदस्यले एटिएम कार्ड प्रयोग गर्दछन् ।
सहकारी क्षेत्रमा नविन प्रविधिको विकास गर्दै आएको हाम्रो टेक्नोलोजीका सञ्चालक सञ्जय महासेठका अनुसार प्रविधिमा सहकारीहरु पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह पुगेको बताउनुभयो । लकडाउनले पनि सहकारीहरुमा प्रविधिको आवश्यकता महशुस गराएको उहाँको भनाई छ । सहकारी क्षेत्रमा प्रविधिमा आधारित नयाँ नयाँ सेवाको विकास गर्दै जाने महासेठले बताउनुभयो । लकडाउनको समयमा धेरै सहकारीले प्रविधिको आवश्यकता महशुस गरेको र प्रविधिमा जोडिने सहकारी बढेको अनुभव उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।